जसले १२ वर्षीया सम्झनालाई बलात्कार गरेपछि ढुंगाले मुखमा हानेर हत्या गरे ! - नेपालबहस
जसले १२ वर्षीया सम्झनालाई बलात्कार गरेपछि ढुंगाले मुखमा हानेर हत्या गरे !
| १५:०२:५४ मा प्रकाशित
११ असोज, बझाङ । बझाङमा बलात्कारपछि मारिएकी सम्झना विकको हत्या स्थानीय युवा राजेन्द्र बोहराले नै गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ । बझाङ मष्टा गाउँपालिका २ की १२ वर्षीया बालिका सम्झनाको हत्या बोहराले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको दाबी छ ।
यसअघि नै उनले गाउँकै एक बालिकालाई बलात्कार गरेको पाइएको छ । यसअघि बलात्कार भएको घटना गाउँमै मिलाएको कागज समेत प्रहरीले बरामद गरेर सार्वजनिक गरेको छ । बोहराले पहिलो बलात्कारको पोल गाउँभरी नै फैलिने डरले सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या नै गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
कसरी भयो बलात्कार ?
सम्झना सधैझै घरबाट टाढा रहेको गोठमा गाईभैसीलाई घाँस हाल्न गएकी थिइन् । घटना तीन दिनअघिको हो । घाँस हाल्न जंगलको बाटो उनी सधै एक्लै जाने गरेकी थिइन् । त्यो दिन पनि उनी एक्लै गइन् ।
सधै उनको कामै त्यही थियो । आमाबुवाले अह्राउने गरेका थिए । सानी छोरी भएपछि मान्नुको विकल्प थिएन् । तर बाटोमा प्राय पछि लाग्ने र फकाएर यौन सम्पर्क गर्न खोज्ने राजेन्द्र्र त्यो पनि पछि लागे । उनी सम्झनाको कोमल शरीर चाहन्थे ।
त्यस पनि दिन पनि राजेन्द्र साथीहरुलाई छाडेर सम्झनाको पछि लागे । जंगलभन्दा केही पर पुगेपछि उनले सम्झनालाई बलात्कार प्रयास गरे । तर उनले मानिनन् । जबर्जस्ती बलात्कार गरेपछि सम्झना चिच्याउन थालिन् ।
केही समय घम्साघम्सी नै पर्यो । तर जब सम्झनाको आवाजले गाउँले आउने जोखिम बढ्यो । राजेन्द्र आत्तिए । अनि बलात्कार गरेपछि उनले ढुंगाले सम्झनाको मुखमा हानेर आवाज सधैका लागि बन्द गरिदिए ।
बलात्कार गर्न खोज्दा चिच्याएपछि सम्झनाको ढुंगाले हानेर राजेन्द्रले हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो । बाटोमा सबैले सहजै शव देख्ने भएपछि उनले मन्दिरभित्र लिएर राखे । अनि आफू घरतिर आए ।
सम्झना जंगलको मन्दिरमा अन्तिम स्वास लिदै थिइन् । घरमा उनको खोजी चल्यो । गोठमा गाईगोरुलाई घास हाल्न गएकी उनी नफर्किएपछि भोलिपल्ट मात्रै उनको शव नजिकैको मन्दिरभित्र फेला पर्यो ।
शरीरमा आधा कपडा नभएको । अनुहार रक्ताम्मे भएर ढुंगाले थिचिएको थियो । शरीरमा कोतर कातर परेको अवस्थामा यौनीबाट रगत समेत बगेको देखिएपछि आफन्तले सोझै बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरे ।
लगत्तै प्रहरी बोलाएर मुचुल्का उठाएपछि घटना बाहिर आयो । यसअघि पनि गाउँमा युवतीलाई बलात्कार गर्दै हिड्ने राजेन्द्र्रतर्फ सबैको आशंका गयो । तर डरले घरभित्रै लुकेर बसेका उनलाई प्रहरीले अर्को दिनको सबेरै पक्राउ गरेर हिराशतमा लियो ।
दुई दिनसम्मको लगातार केरकारपछि राजेन्द्रले अपराध स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ । यद्यपी यसबारे बझाङ प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने जनाएको छ ।
लुटपाटको आरोपमा तीन जना प्रकाउ २ महिना पहिले
सिरहामा सुनचाँदी व्यवसायीको गोली हानी हत्या २ महिना पहिले
अनलाइनबाट हुने ठगीप्रति विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध ४ महिना पहिले
फेसबुक प्रयोगकर्ताबीच म्यासेन्जरमा कुराकानी, ख्याल गर्नुस्, ठगिनुहोला ! ४ महिना पहिले
स्वयम्भुबाट मुद्दा मिलाइदिने भन्दै ९० हजार माग्ने पक्राउ ५ महिना पहिले
विदेशबाट फर्केका श्रीमानको हत्या गरेपछि श्रीमतिले किन गरिन आत्महत्या ? ५ महिना पहिले
अग्रणी शक्ति बनाउन महाधिवेशनः अध्यक्ष थापा १ मिनेट पहिले
टुकोनले श्रममन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र ८ मिनेट पहिले
कोपा अमेरिका २०२१ पनि डिशहोममा प्रत्यक्ष हेर्न पाइने ३३ मिनेट पहिले
माई सेकेण्ड टिचर ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता शुरू, उत्कृष्ट ७ लाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पुरस्कार ४० मिनेट पहिले
माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालकमा हरिभक्त सिग्देल नियुक्त ७ घण्टा पहिले
अष्ट्रेलियाको सिमाना खुल्ला गर्न हतार छैनः व्यापार मन्त्री ४ घण्टा पहिले
सामुदायिक वनमा एक महिलाको शव फेला ११ घण्टा पहिले
गीत गाउँदै, कुल्फी बेच्दै ‘पाकिस्तानी डोनल्ड ट्रम्प’ ! २४ घण्टा पहिले
लगातारको वर्षाले एक पक्की घर भत्कियो ८ घण्टा पहिले
१११ बर्षका वृद्धको दाबी– कुखुराको गिदीले धेरै बाँचे ५ दिन पहिले
ज्यानमारा भाइरसले लियो भारतका धावक मिल्खा सिंहको ज्यान १ दिन पहिले
यार्सा टिप्न गएर सम्पर्कविहीन भएकाकाे उद्धार, तीनको स्वास्थ्यमा खराबी २ दिन पहिले
अनौठो यात्रामा निस्किएका हात्तीहरू यसरी सुते [ हेर्नुहोस् भिडियाे ] ६ दिन पहिले
झुलाघाट नाकाबाट पाँच हजार नेपाली स्वदेश फिर्ता २ दिन पहिले
बेनी बजार कटानको उच्च जोखिममा ४ दिन पहिले
द आर्ट अफ लिभिङद्वारा स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण ५ दिन पहिले
राष्ट्रिय खाद्य बैंकको प्रमोर्टर शेयरमा अत्याधिक प्रतिबद्धता, असार मसान्तबाट शेयर बिक्रि हुने २ हप्ता पहिले
नाइजेरियामा बन्दुकधारीहरुको आक्रमणमा परी ८८ जनाको मृत्यु २ हप्ता पहिले
ब्लड डोनर्स सोसाइटीद्धारा बाँदरलाई फलफूल खुवाउँदै ३ हप्ता पहिले
असार दोस्रो साताबाट स्मार्ट लकडाउन गरिने सिसिएमसीको तयारी ३ दिन पहिले
कोरोना संक्रमणको कारण विश्व कप छनोट सर्न सक्ने सम्भावना १ वर्ष पहिले
इथियोपियाली शरणार्थीलाई सहयोग गर्न सुडानलाई १५ करोड डलर आवश्यक ७ महिना पहिले
प्रदेश ३ को राजधानी : धुलिखेल राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत, आजबाट नाम बाग्मती र केन्द्र हेटौंडा कायम १ वर्ष पहिले